Ndeapi marudzi akasiyana emaTutu masiketi? - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Ndeapi marudzi akasiyana emaTutu masiketi?
Unogona kutanga waziva zvikamu zvikuru zvitatu:
Kupfeka tutu kazhinji kunoratidzira danho rakakura mune yechinyakare basa ra ballerina, sezvo pasina chinhu senge tutu siketi kuburitsa zvizere mitsara yemuviri, kuiviga, nekufumura zvese zvidiki zvehunyanzvi.
Mukupatsanurwa, ndinotenda kuti vadzidzi vazhinji vanoziva kuti kune marefu masiketi erudo ballet, uye kune mapfupi masiketi e classical ballet.
Iko kune zvakare pendulum tutu yemasiketi, uye masiketi anogona kukamurwa kuita platter tutu, pancake tutu, puff tutu, zvichingodaro.
Tutu yega yega ine nhoroondo yayo, uye hukama hwayo nehupenyu hwepamoyo uye nemuviri hunoratidzwa neshanduko.
1. Tutu (Vanodanana)
Iko kushanduka kwekushanduka kwekubva muna 1832 kutanga kwaMaria Taglioni muLa Sylphide.
Akapfeka mune yakazozivikanwa seRomantic tutu, nguo yaTaglioni yaisanganisira yepamusoro-inokwana pamusoro isina mutsipa nemapfudzi, uye bhero-rakaita seruzeji siketi. yakakwinyika yakajeka donje tulle, ichipa kunyepedzera kwekuzara pasina kuita kunge inorema.
British Royal Ballet "Iyo Mukono"
Madhirezi emazuvano eRoma achiri kubva pamipendero yenguva yacho, aine zvinhu zvazvino uno kuita kuti mitsara ireruke uye iratidzike, uye inowanzo gadzirwa nematanho mashanu kusvika matanhatu ehorosi riine hem pakati pebvi nemakumbo.
2. Iyo pendulum tutu (Bhero)
Iyo pendulum tutu iri pakati peiyo classic tutu uye yerudo tutu.
Iyo inogadzirwa nematanho akati wandei etulle, sekubudikira senge yechinyakare tutu, asi iyo yakatetepa yakatetepa yakareba uye ine yakadzika yekudonha, kazhinji kusvika pakati pechidya.
Iyo pendulum tutu inoshandiswa zvakare mune inozivikanwa Degas kupenda
Pakazosvika 1870, vemaItaly ballerinas, vachida kugadzirisa nzira yavo yepoore, vakatanga kupfeka tutus dzakatemwa pamusoro pemabvi kuvabvumidza kuti varatidze mamwe emakumbo avo uye nekuwedzera kuomesa tsoka, netirauzi pasi pemasiketi.
Iyo yakazozivikanwa seyeyeye classical tutu uye ikave yakakurumbira kune mabherlet akadai seSwan Lake.
Iyo Nutcracker Sugar Plum Fairy Pacific Northwest Ballet
Kugadzira rokwe rinobuda kubva muhudyu, raitsigirwa nemhete dzedare dzakabatanidzwa mumatanho aro.Iyo ipfupi uye yakaoma.
4. Tutu rudzi rwePlatter.
Zvakawanda sepancake tutu, asi isina waya yekuibata panzvimbo, yakasonwa nezvidimbu gumi kusvika gumi nemaviri zvehwindi wakaoma, ine nzvimbo yakati sandara, uye yakashongedzwa.
Iyo Royal Ballet Kurara Runako
5. Tutu (Upfu- Pfu)
Iyo inozivikanwa zvakare seBalanchine dhizaina yetutu, yaive yakatanga kugadzirirwa ballet vhezheni yaGeorge Bizet's C Symphony.
Iyo Jewel naGeorge Balanchine - Madhayamondi
Iyo tutu ipfupi ine zvidimbu zvidiki zve netting uye haina kuzivikanwa seyakangoita pancake uye platter tutu.
Izvi zvinobvumira kuti tutu afambe zvakanyanya nemutambi, uku achimupa akapfava, akazara chitarisiko.
Yapfuura:Ndeipi iyo iplate-senge rokwe rakapfekwa na ballerina
Tevere:Iyo yakasarudzika hunhu iwe yaunofanirwa kuziva mune ye ballet kirasi